Vaovao - Vaovaon'ny orinasa - NCG vs Simposium fandaharana Exchange vs Shengda
Tamin'ny 16:00, 20/11/2020, i Wu Quandong, filohan'ny Nongchuanggang Cross Border E-Commerce (Weifang) Co. Ltd, VP Ma Yuyou, dia nitarika ny ekipa hitsidika sy hanatrika fiaraha-miombon'antoka fiaraha-miasa ao East Asia Livestock Exchange Ltd . Ny atiny lehibe amin'ity fivoriana ity dia ny famakafakana ny fifanakalozan-kevitra momba ny valan-javaboary e-varotra miampita sisintany an'i China Nongchuanggang (izay antsoina hoe NCG), Anqiu Shengda Agricultural Products Trade Ltd (izay antsoina hoe Shengda) ary East Asia Livestock Exchange (voalaza eto ho toy ny Exchange). Miady hevitra momba ny tombony azony avy, mitady fiaraha-miasa, fampidirana tombony ho enti-miasa, mampiroborobo ny fanondranana ara-pambolena Anqiu ary ny fampandrosoana ny serivisy ara-bola, manangana ambaratonga fitomboan'ny fambolena Anqiu vaovao.
Nasongadin'i Wu Quandong fa ny valan-javaboary e-varotra miampita sisintany dia tokony hampiasa tanteraka ireo loharanom-pambolena misy ao Anqiu, hifandray amin'ireo orinasa mpanondrana, ary ho lasa sehatra e-varotra miampita sisintany tena an'ny orinasam-panompoana, hananganana Anqiu tsikelikely mankany amin'ny faritra fambolena ambaratonga nasionaly. Ny sehatry ny valan-javaboahary e-commerce dia tokony hamorona fomba fiasa mampifangaro amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet, mampiroborobo ny fifanakalozana e-varotra amin'ny varotra iraisam-pirenena, manambatra ny B2B sy B2C, ary mampifandray ireo mpanjifa kely sy salantsalany miaraka amin'ny loharanom-pahalalana tahiry any ivelany. Raiso ho toy ny teboka fidirana vaovao ny varotra sisintany ary omeo kilalao feno ny tombo-tsoa Xinjiang. Manohiza manambatra ireo tombontsoa mifameno amin'ireo sehatra efatra amin'ny fifanakalozana, dia ny fisafidianana toerana sy ny lisitra, ny fividianana sy ny fivarotana, ny fividianana sy ny fivarotana, ny famatsiana ara-bola. Miorina amin'ny spot, alao ny fifantohan'ny vola an-tserasera sy ny rojom-panomezana ivelan'ny Internet.
Ny mpandray anjara dia nahafantatra ny sehatr'asa lehibe sy ny fomba fiasan'ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny fampisehoana video alohan'ny fivoriambe. Nandritra ny fivoriana dia niresaka momba ny fomba fiaraha-miasa sy ny vinavinan'ny NCG, ny Exchange ary Shengda izy ireo. Gao Fulong, Zhang Min ary Liu Shili dia nandinika sy nifanakalo hevitra momba ny sehatry ny fandraharahana sy ny tombony azon'ny orinasany tsirairay avy, ary nahatratra fikasana fiaraha-miasa savaranonando: hampitombo ny tetikasan'ny vokatra fambolena sy ny sisiny ny Exchange ary mahafeno ny fepetra amin'ny varotra an-tserasera. Royal miankina amin'ny fifanakalozana hanohy hanitatra ny refy, hampiroborobo ny vokatra fambolena Anqiu eo amin'ny tsipika. Ny valan-javaboary indostrialy e-varotra dia mifameno amin'ny Shengda Logistics, mifandray amin'ny orinasa an-tserasera sy ivelan'ny fifanakalozana, ary mampiditra serivisy ara-bola amin'ny famatsiana amin'ny sehatra. Ireo orinasa telo ireo dia namorona modely fiaraha-miasa stratejika amin'ny endrika endrika vokatra.